Bogga 6 aad by wargeyska313 - issuu
ISLAAMKA IYO NOLOSHA
QISADII SAMIRKII NABI AYUUB (C.s).
Qisadii Dheeliminta Ee Nebigeenna Muxamad (Scw)
Nebiga Scw, dabadeed waxaan ku iri itusi jahannamo, waa I tusay, waxaana ku dhex arkay Naago ooyaaya oo tiiraanyeysan oo aan loo naxariisaneyn, Malakul jabriil, ayaan weydiiyay, wuxuuna igu jawaabay, waa kuwa isu qurxiya niman aan qabin. Waxaa kaloo aan ku arkay, Naago saraawiil laami ah lebisan qoortana silsillad ugu jirto, Malakul jabriil ayaan mar kale weydiiyay wuxuuna igu yiri, waa kuwa yareystay ama yasa nimankooda, oo nafur iyo waxyaabo la mid ah ku yiraahda. Waxaan kaloo ku arkay naarta, naago wejiyo madoow oo cunaya mindhicirradooda, wuxuuna iigu sheegay malakul jabriil, inay yihiin kuwa isu geeya Nin iyo Naag aan is qabin. Waxaan kaloo ku aray naarta dhexdeeda Naag madaxeeda loo beddelay madax Doonfaar, jirkeedana jir dameer, laguna cadaabayo kun nooc oo kala duwan, wuxuu iigu sheegay Malakul jabriil, inay tahay tan dadka isku dirta. Waxaan kaloo naarta ku arkay, Niman iyo Naago qoorta looga duuduubay abeesooyin markii ay qaniintana hilibkoodu daadanayo, wuxuuna ii sheegay jibriil inay yihiin kuwa keydsada dahabka iyo fiddada, kuna bixineyn jidka ilaah. Waxaan kaloo ku dhex arkay naarta Niman iyo Naago uu hor yaallo hilib fiican iyo hilib xun, cunayana kan xun, wuxuuna jibriil iigu sheegay inay yihiin nin leh naag xalaal ah ee aadaya naag xaaraan ah, iyo naag leh nin xalaal ah ee aadeysa nin xaaraan ah. Waxaan kaloo ku arkay Naarta Saciiro, niman iyo naago calooshooda naartu ka qeylineyso, kana geleyso afka kana baxeyso dabada, wuxuuna xabiibkey jabriil iigu sheegay inay yihiin kuwa cunaya agoonta xoolahooda. waxaan kaloo ku dhex arkay naarta niman iyo naago laga waraabinaayo malax iyo carun, markay cabaanna hilibkoodu daadanaayo, haddana sidoodii laga dhigayo, si ay u dhadhamiyaan cadaabka, wuxuu iyana jabriil ii sheegay inay yihiin kuwa cuna ribada ama rubisaarka. Waxaan kaloo ku dhex arkay naarta, naago la nasaqay jirkooda uu madoow yahay sida laami oo kale, wuxuu iyana jabriil iigu sheegay inay yihiin kuwa dooriya tintooda iyo abuuristooda. Waxaan kaloo naarta ku arkay,
naago timahooda lagu soo xiray geed la yiraahdo(Shajaratu saquum) biyo kululna lagu shubayo, hilibkooduna daadanaayo, waxaan weydiiyay jabriil, wuxuuna igu yiri: waa kuwa caba daawada, si ay u dilaan ilmaha caloosha ku jira, iyagoo ka cabanaya quudintooda ama korintooda. Nebiga Scw, ka dib albaabkii ayaa xirmay, waxaan kornay aniga iyo malakul jabriil Samada Lixaad, waa samo ka sameysan Jowhar cagaaran, magaceedana waxaa la yiraahdaa (Khaalisa), waxaana igu soo dhaweeyay oo ii bishaareeyay aniga iyo ummaddeeyda Nebi Muuse (Cs), waxaana ku arkay abuurista ilaah Malag weyn oo ku fadhiya kursi dhinac baraf ka ah dhinacna naar ismana deminayaan, wuxuuna ku naadinayaa, waxaa nasahan ilaahii kulmiyay baraf iyo naar ee allow isu dun qaluubta addoomahaada mu’minniinta ah, malaa’ektuna aamiin ka daba leeyihiin. Nebiga Scw, dabadeed waxaan kornay samada toddobaad, waa samo ka sameysan jowhar cad, magaceeduna la yiraahdo (Al- Cajiiba) waxaana halkaa ku soo dhaweeyay Nebi Ibraahiim (Cs) isagoo ugu bishaareynaya kheyr aniga iyo ummaddeyda ah, waxaan ku arkay Beytka layiraahdo (Beytul macmuur) Beytkii la camiray maalin kasta, waxaa siyaarta malaa’eg fara badan, kamana soo noqdaan ka dib, waan socday malakul jabriil, ayaa iga horreeyay, waxaana ku iri ma meeshaan oo kale ayaa la isaga haraa, maxaad iiga hartay? Malakul jabriil wuxuu ku jawaabay, malag kasta wuxuu leeyahay meel uusan dhaafi Karin, haddii uu dhaafana waxaa gubaya nuurka. Nebiga Scw, waxaan arkay malagga miikaa’iil waa malagga kiileeya biyaha roobka, waxaan weydiiyay maxaa laguugu bixiyay miikaa’iil, wuxuuna ku jawaabay waxaa la iigu bixiyay, waxaa la ii wakiilayl in aan biyaha roobka kiileeyo una diro daruuraha meeshii ilaah doono uu ka da’o. Nebiga Scw, ka dib waan ka gudbay, waan socday ilaa aan ka gaaro xadratu Rabbi, waxaana la iigu soo faral yeelay 50 Salaadood maalin kasto allane raalli ayuu iga noqday. Nebiga Scw, dabadeed waan soo laabtay ilaa aan uga imaado Nebi Muuse (Cs) ee samada lixaad markuu arkay ii marxabbeeyay, wuxuna I weydiiyay muxuu rabbigaa ku siiyay.
Nebiga Scw, waxaan ugu jawaabay, waa iga raalli noqday, wuxuuna igu faral yeelay aniga iyo ummaddeyda 50 Salaadood maalin kasta (dharaar iyo habeen) Nebi Muuse (CS) wuxuu yiri noqo oo weydiiso ilaah inuu kaa fududeeyo ummaddaadu waa daciif mana awooddo 50 Salaadood. Nebiga Scw, ayaa yiri yaa goynaya xijaabyadii aan soo maray?. Nebi Muuse, ayaa yiri, halkaan Alle ka weydiiso waa kuu dhawyahay, waana ku ajiibayaa. Nebiga Scw, ayaa yiri, Alle ayaan weydiistay inuu iga kala yareeyo waxaana la iiga dhigay 45 Salaadood, dabadeed waxaan u imid sidii hore Nebi Muuse(Cs) wuxuna markale igu yiri noqo oo Alle weydiiso fududeyn kale, Alle ayaan weydiistay, wuxuuna iiga dhigay 40 Saladood, kamana suulin ayuu yiri Nebiga Scw, inaan ku noqnoqonaayo Alle ilaa uu iiga dhigo 5 Salaadood oo la fadli ah 50 Salaadood. Nebiga Scw, dabadeed waxaan u imid malakul jabriil, ka dib waxaan arkay malaggii khaasinka jannada iyo cajaa’ibteeda iyo wannaagga Alle u diyaariyay mu’miinta, mana ahan mid halkaan lagu sifeyn karo. Nebiga Scw, ayaa yiri, Alle ayaan weydiistay inuu iga kala yareeyo waxaana la iiga dhigay 45 Salaadood, dabadeed waxaan u imid sidii hore Nebi Muuse(Cs) wuxuna markale igu yiri noqo oo Alle weydiiso fududeyn kale, Alle ayaan weydiistay, wuxuuna iiga dhigay 40 Saladood, kamana suulin ayuu yiri Nebiga Scw, inaan ku noqnoqonaayo Alle ilaa uu iiga dhigo 5 Salaadood oo la fadli ah 50 Salaadood. Nebiga Scw, dabadeed waxaan u imid malakul jabriil, ka dib waxaan arkay malaggii khaasinka jannada iyo cajaa’ibteeda iyo wannaagga Alle u diyaariyay mu’miinta, mana ahan mid halkaan lagu sifeyn karo. Nebiga Scw, ka dib waan soo degnay ilaa aan ka nimaado adduunka, iyadoo habeenkii sidiisi yahay, waxaan nimid Mako buraaqada ayaan ka degay, waxaa isagootiyay malakul jabriil, wuxuuna igu yiri haddii aad waa bariisato qoomkaada u sheeg cajaab’ibtii aad soo aragtay, uguna bishaareey naxariista alle. DHAMAAD
Nebi Ayuub (Cs) wuxuu lahaa Saddex (3) Xaas, laba (2) ka mid ah waxay dhaheen na fur waana uu furay, waxaa ku hartay Raxmo, oo iyada u khidmeyn jirtay har iyo habeenna kor taagneyd. Maalinkii dambe, Raxmo waxaa u yimid Dadkii deriska la ahaa waxayna Raxmo ku yiraahdeen waxaan ka cabsaneynaa Jirrada iyo balaayada heysata Nebi Ayuub (Cs) inay nooga dhacdo ilmaheenna ee inaga fogeey Ayuub (Cs) haddii aadan naga fogeyninna xoog Ayaan kaaga saareynaa guriga ee ogoow!!!. Raxmo, arrintaasi way ka xanaaqday dharkeedii ayay xirxiratay, waxayna ku qeylisay Erayadaan “Waa qaraabo goys, waana na goynayaan, guryaheenna ayeey naga bixinayaan”. Raxmo, way xambaarsatay Nebi Ayuub (Cs) iyadoo ooyeysa oo ilintu ka dareereyso, waxayna geysay Tuulo u dhow meeshii ay ka qodday oo gurigoodii ahaa, dadkii deggana Tuulada ayaa u yimid markii ay arkeen xaaladda Nebi Ayuub ayeey yiraahdeen naa naga qaad Ninkaada haddii aadan naga qaadinna Eeyaha naga Ayaan ku soo direynaa ha cunaane. Raxmo, haddana way xambaarsatay mar labaad, iyadoo ooyeysa, markii ay fogeysay ayeey meel dhigtay, waxayna soo qaadatay faas iyo xarig waxay u dhistay guri ka sameysan qoryo, waxayna gogol uga dhigtay bacaad, dhagaxna way ku meegaartay ama ku wareejisay, waxayna qaadatay weel ay tuulada wax uga dooneyso, waxayna tuuladii. Nebi Ayuub (Cs) ayaa yiri, Raxmo ii soo noqo aan kula dardaarmee, way usoo noqotay wuxuuna ku yiri, ma waxaad dooneysaa inaad iiga tagto halkaan, Raxmo waxay tiri ha aka cabsanin Sayidkeygiyoow, aniga kaa tegi mayo intaan noolahay, waxayna aadday tuuladii, waxayna ku shaqeyn jirtay maalintii muufo jabkeed, waxayna ku quudin jirtay Nebi Ayuub (Cs). Dadkii tuulada degganaa ayaa ogaaday raxmo inay tahay Ayuub Xaaskiisii, oo ay u geyso waxay shaqeysato, waxayna yiraahdeen oo ay isku sheegeen Raxmo yaan wax shaqo ah la siinin iyo cunto midnaba. Maalintii dambe, markii ay soo shaqo tagtay ayey ku yiraahdeen naga dheeraaw oo hanoo shaqeynin, naga tag oo hanagu ridin jirrada Ayuub. Raxmo way oysay, waxayna tiri “Yaa Rabbi waad arkeysaa xaaladdeyda in dhulkii ciriiri igu noqday, dadkiina igu qurunsadeen adduunka, ayna naga bixiyeen guryaheennii ee iulaahow ha nagu nicin aakhiro” Ka dib, Raxmo waxay aadday naag uu qabay nin la yiraahdo khabboosh, waxayna ku tiri Xabiibkeygii Ayuub wuu gaajeysan yahay ee ideymi muufo, Naagtiina waxay ku tiri, Naa iga dheerow yuusan igu kaa arkin ninkeyga balse, haddii aad ii jarto tintaada qeybta dhaadheer waan ku siinayaa. Raxmo, waxay lahayd 12 tin oo dhulka jiitameysa oo shabahda ama u eg tintii Nebi Yuusuf (Cs) maxaa yeelay fir bay ku lahayd Nebi Yuusuf, wuxuuna ahaa Awoowgeed Aabaheed dhalay, Timahaas dhaadheer waxaa jeclaa Nebi Ayuub (Cs) Raxmo timihii way u goysay naagtii, Iyana muufadii ayey siisay, dabadeed Raxmo waxay tiri Ilaahow arrintaan waxaan u sameynayaa ninkeyga addeeciddiisa iyo quudinta Nebigaada Ayuub. Nebi Ayuub, markii uu arkay muufo dhameystiran oo ay waddo Raxmo ayuu shakiyay wuxuuna u maleeyay inay iibisay nafsaddeeda, wuxuuna ku dhaartay haddii ilaah caafiyo inuu ku garaaci doono 100 jeydal. Raxmo, markii ay uga sheekeysay qisadii ay timaha ku jartay seygeeda Nebi Ayuub (Cs) wuu ooyay, wuxuuna yiri “Ilaahow xaalkeennu waxay gaartay in Nebigaada Sowjaddiisa ama Xaaskiisa ay soo gaddo timaheeda ayna igu nafaqeyso”. Raxmo waxay tiri, “waxba ha ka murugoon timuhu way soo dhalanayaane” waxayna tiri Muufadii Ayaan goo gooyay waxaan siiyay Nebigii, waana fariistay agtiisa. Raxmo waxay tiri, “waxba ha ka murugoon timuhu way soo dhalanayaane” waxayna tiri Muufadii Ayaan goo gooyay waxaan siiyay Nebigii, waana fariistay agtiisa. Nebi Ayuub markii Tirxiga jirkiisa ka dhaco wuu soo qaadi jiray, wuxuuna ku soo celin jiray jirkiisa, wuxuuna dhihi jiray cuna ilaah baa idinku arsaaqaye, jirkiisii waxaa ka dhammaaday hilibkii, waxaana ku soo haray lafo, xididdo iyo seedo. Nebiga isagoo sidaas u jirran ma halmaami jirin carabkiisa xuska Ilaahay qalbigiisuna ku shukrinta ilaah. Nebi Ayuub (Cs) wuxuu jiranaa 18 Sanno, maalintii dambe ayaa Raxmo tiri “Ilaah wuu kuu roon yahaye haddii aad baryi lahayd wuu ku Caafin lahaa”. DHAMAAD
Bogga 6 aad